Amadi - Baazigar Waa Filimka Nolashayda Wax Badan Ka Badalay - iftineducation.com
Amadi – Baazigar Waa Filimka Nolashayda Wax Badan Ka Badalay
aadan21 / May 12, 2012
iftineducation.com – Amadi magaciisa dhabta ah waa Johnny lover.
waxaa uu dhashay 7 febrayo 1950 wuxuuna ku dhashay ( Ossalapalle Prakasha district Andhara).
Waana actor iyo majaajiliiste waxaa uuna ku barbaaray Magaalada Mombay oo ahayd caasimadii dalka hindiya ee xiligaas.
Waxa uuna bilaabay jilitaanka aflaamta 1980 kii wuxuuna si toos ah u matalay 300 oo filim oo Bollwoodka ah 13 biladoodna wuxu ku qaatay qosolkii ugu wanagsanaa ee dunida xaga majaajilada.
Nolashiisa ugu horeysay waxay ahayd mid saboolnimo ku dhisan wuxuu la noola hooyadiis oo la o dhan jiray TALUGU.
Waxa uun ka gaaray xaga waxbarashada fasalka 7 baad halkasna kaga tagay waxbarashadii caqabado kaga imaanayay dhinaca daruufaha ee nolashiisa, Waxa uuna qabtay shaqooyin kala duwan waxaa kamid ahaa in uu ku gado jidadka waawayn ee caasimada Mombay qalimanta iyo buugaagta la akhristo,
Waxaa uuna nolashiisa hormariyay markii uu tagay Bollwoood ka isagoo halkaas ka bilaabay ciyaarta Dance ka iyo qaadida heesaha balse waxaa la ogaaday in uu ku fiican yahay xaga qosolka oo qofkii arkaaba uu iska qoslaayo bilaa sabab.
Jilitaankiisi koowaad waxa ka caawiyay ku biritaanka Bollwoodka PRITAP JANI iyo Artisc way nee RAM KUMAR.
1999 waxaa gudoonsiiyay bilada qosolka fanaankii waynaa ee Maykal Jockson .
Diiinta uu haysto waa diinta kirnstaanka dadka uu xirirka fiican iyo cilaaqaadka la leeyahay waa dadka Yuhuuda taas oo marar badan xiiso xun ka dhex abuuru gaartay dadka taageera Johnny lover iyo dad ka soo jeeda ISRAEL.
Xaaskiisa waxaa ka yidhaahdaa SUJATHA waxaa uuna dhalay labo caruur ah wiil iyo gabadh waxana la dhaha JIMIE IYO JESSE.
Walaalkii waxaa la dhahaa JIMMY MOSSES kaas oo ka daba qaatay qosolka kuna soo shaacbaxay .
Filimkiii ugu horeysay ee uu ku guulaysto wuxuu ahaa filimkii BAAZIGAR oo uu sameeyay diricter caanka ah ee ABAAS MUSTAN.
Filimkaas oo noqday filimkii wax badan ka badalay dabeecadihiisa iyo nolashiisa.
Guud ahaan wuxuu ku matalay Bollwoood ka 350 filim kuwaas oo qaar ka mid ah guulo ka soo hooyey.
Abaal marinaha ii ku guulaystay afarta ugu qaalisan waxay kala yihiin:
:1997: Star screen award for best comedian” RAJA HINDUSTAN”
1998 The best comedian award :” DEEWAANA MASTANA “
:1999: The best comedia in India “DULHAN RAJA”
:2002: Zee cinema for best Actor in a Comic Role” LOVE KE LIYE KUCHH BHI KU REGA”
Qiso Layaab Leh oo dhex martay mucaashiqiin Somaliyeed oo lagu kala magacaabo.
Sababaha Biyo Baxa Deg Deg Ah Ku Keena Ragga